एनसेल र स्मार्टको सक्रिय ग्राहकसंख्या घट्यो, नेपाल टेलिकमका ग्राहक बढेसँगै बजारहिस्सा सुधार - Technology Khabar
» एनसेल र स्मार्टको सक्रिय ग्राहकसंख्या घट्यो, नेपाल टेलिकमका ग्राहक बढेसँगै बजारहिस्सा सुधार
Technology Khabar १३ माघ २०७६, सोमबार
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पछिल्लो महिनामा आफ्ना सक्रिय ग्राहकहरुको संख्यामा वृद्धि गराउँदै गएको देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)ले आफ्नो ४जी सेवा बिस्तार गरेसँगै सक्रिय ग्राहकहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको तथ्यांकमा देखिएको छ ।
टेक्नोलोजीखबरलाई प्राप्त सक्रिय ग्राहकहरुको तथ्यांक हेर्दा नेपाल टेलिकमले असोजदेखि पुससम्ममा करिब ०.७६ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ भने कात्तिक महिनामा भने असोजको तुलनामा नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुको संख्या बढेपनि प्रतिशतमा भने घटेको देखिएको थियो ।
कात्तिकको सक्रिय ग्राहकहरुको प्रतिशतको आधारमा हेर्दा भने नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहकहरु पुस महिनामा करिब ०.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन् ।
ग्राहक संख्याको आधारमा हेर्दा असोज महिनादेखि पुस महिनासम्म टेलिकमले आफ्ना सक्रिय ग्राहकहरुमा ३ लाख ३३ हजार ३४२ जना थप गर्न सफल भएको छ । मंसिरको आधारमा हेर्ने हो भने टेलिकमले १ लाख ४१ हजार ६३० जना सक्रिय ग्राहक बढाउन सफल भएको छ ।
पुस महिनामा नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहकहरु ९ लाख ११ हजार ४९३ अर्थात कुल बजारको ३९.६० प्रतिशत रहेका छन् ।
नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहकहरु पुस महिनामा वृद्धि हुँदा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी एनसेल प्रालिका ग्राहकहरु भने घटेको देखिन्छ । पुस महिनामा एनसेलका सक्रिय ग्राहकहरु १ करोड ३३ लाख ९१ हजार ७८२ जना रहेका छन जुन प्रतिशतको आधारमा ५८.८५ प्रतिशत हो ।
मंसिर महिनाको आधारमा हेर्ने हो भने एनसेलका ग्राहकहरु झिनो संख्यामा घटेका छन् । मंसिरमा एनसेलका ग्राहकहरु १ करोड ३९ लाख २ हजार ६ सय थिए जून प्रतिशतको आधारमा हेर्दा ५८.७९ प्रतिशत हुन आउँछ । एनसेलसँग मंसिर र पुस १ महिनामा केबल ८१८ जना ग्राहकहरु कम भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
अर्को नीजि सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्टको सक्रिय ग्राहकहरु भने एक महिनाको अवधिमा ह्वात्तै घटेका छन् । मंसिरमा स्मार्ट टेलिकमसँग ५ लाख १९ हजार ५०९ सक्रिय ग्राहकरु थिए जून तथ्यांक कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएपनि यथावत रहेको थियो तर हाल कम्पनीको लाइसेन्स फिर्ता दिने सरकारी निर्णयपछि आएको नयाँ तथ्यांकमा भने स्मार्टका ग्राहक उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिन्छ ।
स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग पुस महिनामा सक्रिय ग्राहकहरु केबल ३ लाख ५३ हजार ८४८ जना मात्र रहेका छन् । त्यस्तै प्रतिशतको आधारमा हेर्दा भने मंसिरमा २.२८ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेकोमा हाल पुस महिनामा स्मार्टसँग भने केबल १.५५ प्रतिशत बजार हिस्सा मात्र रहेको देखिन्छ ।
उपलब्ध तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल २ करोड २७ लाख ५७ हजार १२३ जना सक्रिय मोबाइल फोन सेवाग्राहीहरु रहेका छन् ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७६, सोमबार
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम संचालनका लागि ६ कम्पनी सर्टलिस्टमा, कसले मार्ला बाजी ?
शाओमीले मार्च २९ तारिखमा नयाँ उत्पादन घोषणा गर्ने, के के छन् सूचीमा?
एप्पलको आईफोन सेभेनमा ३.५ मिलिमीटरको अडियो ज्याक राखिने